Famatsiana herinaratra :: “Olana teknika no nahatonga ny fahatapahana”, hoy ny Jirama • AoRaha
Famatsiana herinaratra “Olana teknika no nahatonga ny fahatapahana”, hoy ny Jirama
Nanomboka tamin’ ny zoma lasa teo ary nitohy ny sabotsy, no niaina tao anaty haizina ny mponina sasany teto Antananarivo sy ny mano­didina. Nisy fahatapahana matetika ny herinaratra tamin’ny faritra maro. Ny olana teknika fa tsy delestazy no nentin’ireo mpitantana ny orinasa fa antony mahatonga an’izao fikorontanan’ny famatsiana herinaratra izao.
“Tena matetika sady nifanesy ny fahatapahan-jiro taty aminay, ka natahorana mihitsy ny hisian’ny fahasimban’ireo fitaovana mandeha amin’ny herinaratra. Tsy mbola mpitranga mihitsy ny toy izao satria ao anatin’ny iray andro dia tapatapaka hatrany ny herinaratra”, hoy ny renim-pianakaviana iray, monina eny Ivandry. Mpanjifan’ny Jirama maro ihany koa no voatery niaritra ny fahatapahan-drano izay niaraka tamin’io fahatapahan-jiro io.
Vahaolana fohy ezaka
Ny olana teknika tamin’ ireo milina mpamatsy ny herinaratra no voalazan’ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny jirama fa nahatonga ny fahatapahana. “Nisy ny fahataran’ny famatsiana solika tamin’ny toby famatsi­ana herinaratra. Teo ihany koa ny tsy fahampian’ny herinaratra novokarina avy any Andekaleka vokatry ny tsy fahampian-drano. Raha tokony hamokatra 24 mégawatts io toby io dia 10 méga­watts fotsiny ihany sisa no novokariny satria ambany ny haavon’ny rano any an-toe­rana”, hoy ny tale jeneraly mpisolo toerana ao amin’ny Jirama, nandritra ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety, teny Ambohijatovo, omaly.
Na izany aza, nilaza ny filohan’ny Filankevi-pitantanan’ny Jirama fa: “efa misy ny vahaolana fohy ezaka entina hamahana ny olan’ny fahatapahana eto an-drenivohitra”. Anisan’izany , ohatra, ny fano­loana an’ireo tariby mitsinjara ny herinaratra, ireo fitaovana kely fanavahana ny herinaratra (isolateur) , ny fanamboa­rana an’ireo tranon-jiro.
Efa misy ihany koa, hoy izy, ny fanamboarana tranon-jiro hafa, izay mitsinjara ny jiro eto Antananarivo. Etsy an-kilany, hirosoana ny fanatsa­rana ny fitaovana fitsinjarana jiro ka manomboka eo Ambodivona ny ampahany voalohany . Hanomboka eny Anosizato mihazo an’Arivonimamo ny andiany faharoa.
Hosantarina amin’ity herinandro ity ny asa fanamboarana. Hisy fampilazana mialoha ny fahatapahana ary tsy hitohy isan’andro mba ho fitsinjovana ny mpanjifa.
Manomboka mamatsy rano ny faritra sasany ny toby eny Amoronankona
Taorian’ny fitsidihana nataon’ny minisitra mpisolo toerana misahana ny Rano sy angovo ary ny akoran’afo, teny amin’ny toby famokarana rano eny Amoronankona, dia efa manomboka mahazo rano ny faritra sasany. Isan’ izany ny eny Ambohimahitsy, indrindra ny faritra misy ny Akamasoa. Voalaza fa mbola ao anatin’ny andrana tanteraka aloha izy io, ka izay no antony mahatonga ny toerana sasany tsy mbola mahazo rano.
“Somary ratsy ilay fitaovana ampiasain’ny orinasa, ka mety ho vaky raha handefasana rano be dia be. Misy antoka anefa izy io, ka efa eo am-panamboarana sy ny fanoloana ny fitaovana mba ho mafimafy koakoa ny orinasa misahana izany”, hoy ny fanazavana nomen’ny filohan’ny Filankevi-pitantanana eo anivon’ny orinasa Jirama, Rasamoelina Andriamanam­pisoa Soloniaina.
Nilaza ihany ny tompon’ andraikitra iray hafa fa misy fiantraikany amin’ny fahatapahan-drano ny fisian’ny deles­tazy. Na izany aza, dia nilaza ito farany fa hisy ny fandavahana lavadrano ho an’ireo faritra iva rehetra mba hamahana olana ny famatsiana rano eny amin’izy ireo.
Fanorenana fotodrafitrasa marolafy :: Ho lasa tanàna maodely amin’ny fampandrosoana i Morondava